Vehivavy Jamaikana Niaka-peo Tao Amin’ny Aterineto Hanoherana Ny Fanohintohinana Eny An-dalambe Mihatra Amin’izy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2014 3:27 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, русский, 日本語, Español, English
Sarivongana ao amin'ny Zaridainan'ny Fanafahana tsy ho andevo intsony, New Kingston, Jamaika. Sary avy amin'i Dubdem e FabDub, zon'ny mpamorona CC BY 2.0 license.
Nanapa-kevitra hiresaka ny olana ara-tsosialin'ny herisetra ara-nofo imasom-bahoaka ( fantatra na aiza na aiza manerantany amin'ny fikasikasihan'ny lehilahy ny vehivavy tsy fantany akory) ilay mpanao famakafakana an-gazety ao Jamaika tamin'ny nanoratany an-dahatsoratra ny zava-niainany. Nahaliana tokoa ny mpamaky, indrindra fa ny lehilahy, ny lahatsoratr'i Karen Lloyd.
Valinteny iray avy amin'ny lehilahy iray mpamaky nanohitra ny filazan'i Lloyd hoe tsy natao hohanin'ny daholobe ny faritra (rehetra) amin'ny tenany manokana tamin'ny fanasongadinana fa fananam-bahoaka ao ‘Back Road’ (toera-malaza fivarota-tena ao Jamaika) ny fivaviana.
Manam-pahaizana momba ny haisoratra Carolyn Cooper nandray naoty ilay matoandahatsoratra sy ny fanehoan-kevitry ny olona tamin'ny “fitarazohan'ny olan'ny herisetra am-bava sy ny fanararaotana ara-batana mihatra amin'ny tovovavy sy ny vehivavy ao Jamaika”. Nandà tamim-pahasiahana ilay fandresen-dahatra “Back Road” izy tamin'ny filazana hoe:
Tsy tahaka an-dRamatoakely Lloyd, mivaro-tena (taovam-pananahana) ny vehivavy ao amin'ny ‘Back Road’. Na dia izany aza, tsy fanananam-bahoaka ny fivavian'ny mpivaro-tena. Na tsara doka na tsia, dia an'olona iray manokana ny fivzavian'ny vehivavy iray mpivaro-tena. Ary manan-jo hamaritra ny fampiasana azy sy ny sandany ny tompony. Manan-jo hifidy izay mpanjifany izy, na dia ao anatin'ny fahasahiranana ara-toekarena mahakivy aza. Manana zo ny mpivaro-tena. Manan-jo fototra ho voaaro amin'ny fanararaotana ara-nofo izy ireo. Ary ny fivarotan-tena dia tsy midika fa hamoy ireo fitakiana no tokony hifampiraharahana amim-pahamendrehana ianao.
Ny lahatsoratr'i Lloyd, izay nanomboka ny tantarany tamin'ny namelahany lehilahy iray namihina ny nonony, dia nisedra fanazavana adaladala (nataony izany satria hitany fa tsara loatra ravehivavy), mampifantoka amin'ny fomba fisainan-dehilahy maro fa mahazo izay tadiaviny amin'ny fomba fiakanjo na fomba fijeriny ny vehivavy.
“Misy mihevita fa mandray ny andraikiny manontolo amin'ny fanairana nataony tsy nokasaina ny vehivavy manintona”, hoy i Cooper nanoratra tao amin'ny lahatsoratra bilaoginy. Indrisy fa maro amin'ny lehilahy no manana izany fijery izany. Lehilahy iray ohatra, nanoratra taratasy hoan'ny mpamoaka lahatsoratra ho valin'ny matoan-dahatsoratr'i Lloyd: “Tsy fananam-bahoaka ny Fivaviana, saingy mitaky izany ve ny vehivavy” hoy i Cooper namaly:
Nofaranan'ilay antidahy tamin'ny fanontaniana mahatezitra ny taratasiny: ‘Manana andraikitra ho maotina kokoa amin'ny fomba fanintonany ve ny vehivavy?” Tsy resaka fomba fitafin'ny vehivavy izany. Fa na dia ao anatin'ny fiarahamonina isaronan'ny vehivavy mirakotra hatrany am-paladia ka hatrany an-tampondoha aza, dia mbola ahiana hatrany ny fanararaotana ara-pananahana. Manana andraikitra hifehy tena sy hifehy ny tanany sy ny filahiany ny lehilahy.
Mba tsy ho voafandrika ao anatin'ny fieritreretana fa valisoa ny fitodihana ara-nofo tsy niriana, dia mila miady amin'izany ny vehivavy. Tsy afaka ny hiaritra fotsiny isika. Mila ampahafantarintsika amin'ny lehilahy fa tsy manan-jo hanao antsika ho fialam-boly tsy araka ny sitrapontsika izy ireo. Ary ny famaliana tampoka ny herisetra ara-nofo – na am-bava izany na ara-batana – no mety ho fomba fanakanana mahomby indrindra.
Manerana ny tabilao: ambanivohitra sy afovoan-tanàna , mainty, fotsy sy zarazara; ny vondrona ara-poko tsirairay avy. Tsy misy dikany ny resaka fahaleovantena rehetra, na eo amin'ny firenena na an'ny tena raha tsy afaka mitsabo ity aretina mihanaka ity isika.
Somary niparitaka kely ihany tao amin'ny media sosialy ny adihevitra satria nizara rohy tahaka ity iray ity, izay manazava ny maha-zavadoza ny fanohintohinana eny an-dalambe mihatra amin'ny vehivavy sy ny tokony ataon'ny lehilahy hanafoanana izany ireo mpisera Facebook Jamaikana.